Mmejọ 5 kacha elu iji zere na ahịa akpaaka | Martech Zone
Mmejọ 5 kacha elu iji zere na ahịa akpaaka
Tọzdee, Disemba 13, 2016 Wednesday, December 14, 2016 Anthony Bergs
Azụmaahịa ahịa bụ teknụzụ dị ike nke gbanwere ụzọ azụmaahịa si azụ ahịa ahịa dijitalụ. Ọ na - abawanye arụmọrụ ahịa ma na - ebelata ihe ndị metụtara ya site na ị na - emegharị usoro ahịa na azụmaahịa ugboro ugboro. Companies nile nha nwere ike iri uru nke ahịa akpaaka na supercharge ha ndu ọgbọ na ika ika mgbalị.
Karịrị 50% nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eji ngwa ngwa ahịa, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị fọdụrụ na-eme atụmatụ iji ya na ọnwa 6-12 na-esote. Okwesiri ighota na otutu ulo oru ndi na eji igwe ahia emeela ihe achoro. Ọtụtụ n'ime ha na-eme ụfọdụ mmejọ nkịtị na-emebi mgbasa ozi ahịa ha. Ọ bụrụ n’ị na-eme atụmatụ iji ahịa akpaaka maka ụlọ ọrụ gị, zere mmejọ ndị a iji mee ka ohere ịga nke ọma gị na teknụzụ ọgbara ọhụrụ dị elu:
Zụta Platform Automation Platform Njọ
N'adịghị ka nyiwe teknụzụ ahịa azụmaahịa ndị ọzọ dịka ịre ahịa email ma ọ bụ ngwaọrụ mgbasa ozi mmekọrịta, akụrụngwa azụmaahịa chọrọ njikọta nke ngwanrọ na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta, weebụsaịtị, CRM dị ugbu a na teknụzụ nsuso ndị ọzọ. Ọ bụghị ngwa ngwa akpaaka niile ka eme ka usoro na njirimara. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụta sọftụwia naanị dabere na njirimara na uru ya. Ọ bụrụ na sọftụwia ọhụrụ ahụ adabaghị na sistemụ ndị dị gị, ọ ga - akwụsị mepụta ọgbaghara nke siri ike idozi.
Mee nyocha sara mbara na nyocha ngosi tupu ịmechaa akụrụngwa akpaaka maka ụlọ ọrụ gị. Sọftụwia na-ekwekọghị ekwekọ ga-enweta obere, agbanyeghị uru na atụmatụ ọ na-enye.
Ogo nke Data Ndị Ahịa gị
Ihe data bu isi ihe nke ahia akpaaka. Ihe na-adịghị mma nke data na-arụpụta nsonaazụ ọjọọ n'agbanyeghị na usoro ịzụ ahịa dị mma na mmejuputa ya nke ọma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25% nke adreesị email ga-agwụ kwa afọ. Nke ahụ pụtara, nchekwa data nke 10,000 email ids ga-enwe naanị 5625 ziri ezi ids n'ime obere oge nke afọ abụọ. Adreesị ozi-e anaghị arụ ọrụ na-ebute bounces nke na-egbochi aha ọma nke ihe nkesa email.
Ga-etinyerịrị usoro iji hichaa ebe nchekwa data kwa oge. Na enweghị ụdị usoro a, ị gaghị enwe ike ịkọwa nloghachi nke itinye ego na azụmaahịa azụmaahịa.
Ọdịmma nke Ọdịnaya
Ahịa akpaaka anaghị arụ ọrụ iche. Ikwesiri imeputa ọdịnaya di elu nke na eme ka ndi oru ahia bawanye. Okwesiri ighota na maka ahia ahia iji nweta ihe ịga nke oma, ntinye aka nke ndi ahia kwesiri. Ọ bụrụ na ị mejuputa akpaaka na-ere ahịa na-enweghị itinye mgbalị dị ukwuu n'ịmepụta ọdịnaya dị mma kwa oge, ọ nwere ike ibute ọdachi zuru oke.
Ọ dị mkpa ịmata mkpa ọdịnaya dị ma nwee usoro dị mma iji dozie ọdịnaya dị mma kwa oge.
Sub-Ezigbo ojiji nke Platform Atụmatụ
N'etiti ụlọ ọrụ ndị nakweere akpaaka ahịa, naanị 10% ejirila atụmatụ niile nke ngwanrọ ahụ. Ebumnuche njedebe nke iji akpaaka bụ iji kpochapụ enyemaka mmadụ site na ọrụ ugboro ugboro. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ejighị sọftụwia ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ọrụ akwụkwọ ntuziaka nke ngalaba ahịa agaghị belata. Kama nke ahụ, usoro ịzụ ahịa na ịkọ akụkọ ga-adịwanye ọkụ ma nwee ike izere njehie.
Mgbe ị kpebiri ịmekọrịta akpaaka ahịa, gbaa mbọ hụ na ndị otu ahụ gafere ọzụzụ zuru oke n'iji atụmatụ sọftụwia. Ọ bụrụ na onye na-ere ihe anaghị enye ọzụzụ izizi, mgbe ahụ ndị otu gị kwesịrị itinye oge dị ukwuu na Portal nke ngwanrọ ahụ ma ghọta nuances nke ngwaahịa a.
Depdabere na Email
Azụmaahịa ahịa malitere site na akpaaka nke ịre ahịa email. Agbanyeghị, n'ụdị ya ugbu a, sọftụwia ahụ etinyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọwa dijitalụ niile. N'agbanyeghị itinye akpaaka nke ịzụ ahịa, ọ bụrụ na ị ka na-adaberekarị na ozi ịntanetị iji nyefee ndị na-eduga, ọ bụ oge ịtụgharị uche na atụmatụ ahịa niile. Jiri usoro mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, injin ọchụchọ na weebụsaịtị iji nye ndị ahịa ahụmịhe na-enweghị ntụpọ iji nweta ebumnuche ha. Encedabere na email nwekwara ike iwe ndị ahịa iwe ruo n'ókè ha malitere ịkpọ ụlọ ọrụ gị asị.
Iji nweta oke nloghachi na itinye ego na azụmaahịa azụmaahịa, ịkwesịrị ijikọta ọwa niile ma jiri ike ọwa niile gbanwere atụmanya n'ime ndị ahịa.
Azụmaahịa ahịa chọrọ ntinye ego mbụ dị mkpa gbasara oge na ego. Ọ bụghị otu anwansi anwansi nke nwere ike idozi nsogbu ịma aka gị. Ya mere, tupu i kpebie ịzụta ngwá ọrụ akpaaka na-ere ahịa, jide n'aka na ị na-ewepụta oge site na usoro ugbu a iji tinye ya n'ụzọ zuru ezu na usoro ahụ.
Ọzọkwa, kpalie ndị otu gị ka ha mụta ihe ọhụrụ ma hazie azịza dabere na ihe ị chọrọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwedịrị ike ịrịọ onye na-ere ahịa ka ịhazie otu usoro dịka ihe ị chọrọ. Ebumnuche ikpeazụ kwesịrị ịbụ iwepụ ihe enyemaka mmadụ site na mmemme azụmaahịa a na-eme ugboro ugboro ma mezie usoro ndụ ịzụta.
Tags: akpaakazereakụrụngwa ahịaahia akpaaka njehieemehie
Anthony bụ onye njikwa ọrụ na Ndị edemede Kwa Oge ebe o jiri uzo di iche na nke ahaziri iche zuta ahia ndi ahia ya. Enweghị oge ma ọ bụ ọchịchọ ịde akwụkwọ gị? Nye anyị ọrụ ide ọkachamara na-agbalị na ka ibu ịda n'ubu gị! Anyị ga-azọpụta gị oge nke mgbagwoju anya na nrụgide site na ịme ọdụm nke ọrụ maka gị.
Mbelata ụgbọ ala agbahapụ oge ezumike a: Atụmatụ 8 iji metụta ahịa
Dee 14, 2016 na 9: 47 AM
Ihe na-adọrọ mmasị. Obi dị m ụtọ na ị kpọtụrụ aha na ịzụ ahịa ahịa bụ maka ụlọ ọrụ nha, n'ihi na ọ bụ akụkọ ifo nkịtị na ọ bụ naanị ndị buru ibu nwere ike irite uru site na ngwaọrụ akpaaka.
Anthony egwu @ (@onyedikachi_)
Dec 15, 2016 na 5:33 PM
Maria, daalụ maka nzaghachi a.
Kpamkpam kwenyere na gị. Obu akuko ifo a n’etukwasiri ya n’aka “bust” !!!
Dee 28, 2016 na 5: 31 AM
Daalụ maka ndụmọdụ. M na-eme atụmatụ na-agbalị si ahịa akpaaka na afọ ọhụrụ na e nwere ọtụtụ ihe na-amụta. Kedu ihe ị chere gbasara nyiwe, dịka GetResponse? Nsogbu maka ọtụtụ obere ụlọ ọrụ bụ mmefu ego maka ire ere akpaaka ngwanrọ. E mechaa, a ga-enwezi oge ọzụzụ.
Dee 31, 2016 na 1: 17 AM
Ndewo Edna, ị kpaliri m ịkekọrịta echiche m na nhọpụta gị nke ikpo okwu ahịa akpaaka. GetResponse bụ ihe ngosi siri ike - mana ịkwesịrị ijide n'aka na ị ga-enyocha etu ị ga-esi jiri ya na ụdị akụ ị nwere tupu oge eruo. Edeela m ihe ndị a ihe na ịzụta a Marketing akpaaka n'elu ikpo okwu Ebe a.
Jan 24, 2017 na 7: 21 AM
Akwa post, Douglas! Kwesịrị ịgụ maka onye ọ bụla na-eche echiche ịzụta ihe eji eme akpaaka akpaaka. Daalụ maka ịkekọrịta ahụmịhe gị.
Jan 24, 2017 na 7: 19 AM
Edna, daalụ maka nzaghachi gị. Enwetụbeghị m GetResponse, yabụ n'eziokwu, enweghị m ike ịtụ aro ihe ọ bụla. Enwere nsogbu nke mmefu ego maka obere ụlọ ọrụ, mana enwere m ike ịsị na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bara uru. Ajụjụ banyere ọzụzụ dịkwa, mana imirikiti ngwaọrụ ma ọ bụ softwares na-enye nnwale n'efu maka gị ijide n'aka na ọrụ ahụ dabara mkpa azụmahịa gị.